Ghana iyo Ivory Coast oo caawa u tartamaya koobka Qaramada Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ghana iyo Ivory Coast oo caawa u tartamaya koobka Qaramada Afrika
A warsame 8 February 2015
Mareeg.com: Ciyaaraha Qaramada Afrika ayaa lagu wadaa in caawa lagu soo gebagebeeyo waddanka Equatorial Guinea.
Tartankan ayaa halkaasi ka socday saddexdii todobaad ee la soo dhaafay, waxaana ciyaarta kama dambeysta ah isugu soo haray laba kooxood oo aad loogu qadariyo ciyaaraha Afrika waa Ghana iyo Ivory Coast.
Xiriirka Kubadda Cagta ee Afrika ayaa sheegay inay codsadeen in la siiyo boolis dheeraad ah oo suga ammaanka si loo ilaaliyo ammaanka ciyaartoyda iyo taageerayaashaba.
Malaha waa ciyaar ay dad badan oo jecel ciyaaraha ay ku riyoonayeen inay daawadaan kama dambeysta koobkan Qaramada Afrika, oo labada dal ee dariska ah ee uu weliba ka dhaxeeyo xifiiltanka gaarka ah ee kubadda cagta ee Ghana iyo Ivory Coast ayaa ku kulmaya garoonka Estadio De Bata.
Ciyaartan ayaa dad badan waxa ay xasuusin doontaa ciyaartii 1992-dii ee ay kama dambeysta koobkan isaga hor yimaadeen labadan kooxood, markaasi oo Ivory Coast ay ku guulaysatay gool kulaad 11-10 ah, halkaasina waxa ay Ivory Coast ku qaadday koobka kaliya ee ay haatan haysato.
Inkastoo ay laba jeer oo hore ay soo gaartay kama dambeysta koobkan Qaramada Afrika haddana waa ay guuldareysatay, oo labada jeerba waxaa koobka looga qaaday gool kulaad, oo marna 2006-dii waxaa tuntay kooxdii Masar marka kalana waxa ay aheyd 2012-kii markaa oo Zambia koobka la hooyatay.
Afka hore ayaa waxaa u saaran kooxda Ivory Coast ciyaaryahanka ugu qaalisan Afrika misana ah ciyaaryahanka lagu galay khaladaadka ugu badnaa ee tartanka ee Wilfried Bony iyo ciyaaryahan Gervinho oo ciyaaro wanaagsan tartankan kusoo bandhigay, oo layaab ayey noqon doontaa haddii ay kooxda Ivory Coast gool dhalin wayso.
Laacibka Afrika, Yaya Toure, oo hogaaminaya kooxdan ayaa laga filayaa inuu soo bandhigo ciyaar ciyaar dhaaftay si aanay ugu dhicin sidii ku dhacday kooxdiisa sanadihii 2006-dii iyo 2012-kii.
Saadaashuna waxa ay saaran tahay kooxda Ivory Coast, sida uu leeyahay xiddigii hore ee Reer Mali, Freddie Kanoute, oo uu weriyaha BBC Cabdifitaax Ibraahim Maxamed Cagayare, kula kulmay garoonka Estadio De Malabo.
“Waxaan filayaa in ciyaartu ay noqon doonto mid isu dheeli tiran, waxaan isleeyahay labada kooxood waa ay awood badan yihiin, waana ay ku guulaysan karaan koobkan, waayo waxaa la oran karaa in kooxahan ay yihiin kuwii ugu wanaagsanaa tartanka, anigu waxaan isleeyahay Ivory Coast ayaa qaadi karta koobka waayo muddo dheer ayey sugayeen, si wanaagsan ayeyna uga soo baxeen kulamadii ay dheeleen, waxaan isleeyahay anigu waa ay u qalmaan inay koobkan ku guulaystaan.”
Dhanka kale kooxda Xidigaha Madmadow ee Ghana ayaa iyana waxa ay ku han weyn tahay inay soo afjarto niyadjabkii sanadihii ugu dambeeyay ay kala kulmaysay tartankan, oo misana ay ugu dambeyn ku hanato koobkeedii 5-aad, iyadoo 33 sano laga joogo markii ugu dambeysay ee ay koobkan qaaddo.
Ghana ayaa 9 jeer gaartay kama dambeysta koobkan Qaramada Afrika, oo koox dhankaa kula tartami karta ma ay jirto, afar ka mid ah waa ay guulaysatay, afarna waa ay guuldareysatay, midka kalana waa mid ay maanta ku han weyn tahay.
Walow uu si wanaagsan u dheelo ciyaaryahanka dhexda kaga dheela ee Andrew Ayew, ayna suuragal tahay inuu soo laabto kabtankooda Gyan iyo weliba saameynta tababare Avram Grant uu leeyahay oo ah mid aad u sarreysa, ayaa haddana dad badan waxa ay mala awaalayaan in kooxdan aanay tartankan ku guulaysan karin.
Labada kooxood dhanka weerarka waxaa ku horreysa kooxda Ivory Coast, halka difaacana ay ku wanaagsan tahay kooxda Ghana.
Labada tababare ee maanta iska hor imanaya ayaa mid walba waxa uu ku rajo weyn yahay inuu koobkan ku guulaysto, waxaase kala saari doonta natiijada ciyaarta.
Dabley weerar khasaare geystay ku qaaday guri taliye boolis ka deganaa Boosaaso